Showing ९१-१०० of ११४ items.
‘भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सकिएन भने राजनीतिक कार्यकर्ता भएको औचित्य हुँदैन’
गाउँपालिकाको खास–खास समस्या के हो ? – गाउँपालिकाको सबभन्दा पहिलो समस्याचाहिँ व्यवस्थापकीय चुनौती नै हो । कर्मचारीको रिक्तता छ । जसले कार्यसम्पादनमा जटिलता निम्त्याएको छ । अर्को चाहिँ सङ्घीयता ठीक रूपमा सदुपयोग गर्ने कुरामा चुनौती छ । मान्छेको सोचाइमा चाहिँ स्थानीय तहले सम्पूर्ण विकास गर्नुपर्ने भन्ने छ । सङ्घीयताको नयाँ–नयाँ मोडलमा हामी भएकाले गर्नुपर्ने धेरै बाँकी छन् । तर, पब्लिक लेभलमा सोचाइ एकदमै कम छ । मुख्य चुनौती व्यवस्थापन नै हो । यहाँ गर्छु, त्यहाँ गर्छु भन्दा पनि भइरहेको कुरालाई सुधार गर्नु पनि राम्रो कुरा हो । जस्तो कर्मचारी कुरा आयो यो सबै स्थानीय तहहर
प्रकाशित मितिः जेठ ११, २०७६
८२३ पटक पढिएको
कामदार हैन, दक्ष कामदारको माग बढ्दो छ
पत्रकारितास“गै विज्ञापन एजेन्सीको रूपमा व्यवसाय शुरु गरेका इटहरीका पवन अधिकारी छोटो समयमै स्थापित व्यवसायी बन्न सफल भएका छन् । समाचारमा काम गर्दै गर्दा विज्ञापन एजेन्सी सञ्चालन गरेका अधिकारी यतिबेला प्रदेन नम्बर १ मै उदीयमान व्यवसायीको रूपमा देखिएका छन् । पाथीभरा एड्भरटाइजिङ प्रालिले नै उनलाई व्यवसायीको पहिचान दिलायो । त्यति मात्र नभएर अहिले उनी समग्र विज्ञापन एजेन्सीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै १ नम्बर प्रदेशबाट नेपाल विज्ञापन सङ्घको प्रदेश १ को संयोजकसमेतको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् । गत माघ २७ गतेदेखि उनले इटहरीमा पाथीभरा जव लिङ्क प्रालिसमेत सञ्चालन गर्दै आएका छन् । कुनैबेला पत्रिका
२,१५८ पटक पढिएको
'अव घोकन्ते विद्याको काम छैन्, हामी स्मार्ट किड्समा जोड दिन्छौं'
विद्या धनम् सर्व धनम् प्रधानम् भन्ने उक्तिलाई मनन् गर्ने हो भने संसारको सबभन्दा ठूलो वा मुख्य धन नै विद्या हो भन्ने बुझिन्छ । राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकास लागि शिक्षा मेरुदण्ड हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । शिक्षा ज्ञानको ज्योति हो । शिक्षा चेतनाको मुहान हो । शिक्षा अन्तरदृष्टिको नयन हो । शिक्षा नै विकासको पूर्वाधार हो । शिक्षार्जनपश्चात् पाएको शिक्षा वा ज्ञानलाई भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ नत्र शिक्षा, चेतना र ज्ञानको मुहान नै सुख्खा हुँदै जान्छ । यही कुरालाई मनन् गरी वि।सं। २०५० साल पौष २१ गते बुधबारका दिन शुभ मुहूर्तमा धरानका चारजना शिक्षाप्रेमी युवाहरू सुदीप यल्मो योञ्जन, राजेन्द्रकु
२,०६२ पटक पढिएको
‘व्यवसाय व्यवस्थापन गर्न पढाइ पनि महत्वपूर्ण कुरा रहेछ’
‘अहिले टीभीएस अटोको शो रुम सञ्चालन गरिरहेको छु, केही दिनमै इटहरीको सङ्गीत चौकमा नयाँ होटलको पनि सञ्चालन हुनेछ । त्यसका साथै आफूले पढेको सिभिल इञ्जिनियरिङ सम्बन्धी कन्सल्टेन्सी पनि सञ्चालन गरिरहेको छु ।’व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नु उनको परिवारको लागि नयाँ अनुभव भने होइन । तर, उनले पढाइको सिलसिलामा इञ्जिनियर बने । भारतको ब्याङ्लोरमा सिभिल इञ्जिनियरिङ कोर्ष गरेपछि उनी काठमाडौंमा जागिर खान थाले । २६ वर्षीय युवा व्यवसायी मिसन पराजुलीले जागिरे जीवनभन्दा व्यवसायमै भविष्य देखे । अहिले उनी उदयीमान युवा व्यवसायीका रूपमा देखिएका छन् । मोटरसाइकलको शो रुमदेखि अटो बजारमा पनि उनको उपस्थिति रहेको
प्रकाशित मितिः बैशाख ११, २०७६
१,१७१ पटक पढिएको
‘साहित्यमा महिलाका धेरै मुद्दा आउनै बाँकी छन्’
साङ्ग्रिला पब्लिकेसनले बजारमा ल्याएको कवि विमला तुम्खेवाको नयाँ कविता सङ्ग्रह ‘हत्केलामा पृथ्वी लिएर उभिएको मान्छे’ का विषयमा देशका विभिन्न ठाउँमा विमर्श भइरहेको छ । लामो समय पूर्वका साहित्यिक गतिविधिमा सक्रिय मोरङकी विमला अहिले काठमाडौंमा रहेर साहित्य सिर्जनामा सक्रिय छिन् । गत साता सङ्ग्रहको विमर्श कार्यक्रमका लागि धरान आएकी विमलासँग ब्लाष्टले गरेको छोटो कुराकानीः नयाँ सङ्ग्रह आएपछि पाठकहरूबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ ? – सङ्ग्रह आएपछि चैत २४ मा चितवन र चैत ३० मा धरानमा विमर्श कार्यक्रम भए । दुवै कार्यक्रममा राम्रो प्रतिक्रिया पाएकी छु । त्यसबाहेक अरु पाठक
प्रकाशित मितिः बैशाख ८, २०७६
१,१८० पटक पढिएको
इजिप्टमा जनमतसङ्ग्रह, राष्ट्रपतिको शासनकाल लम्ब्याउने मुख्य प्रस्ताव
कायरो / इजिप्टका राष्ट्रपतिको शासनकाल लम्ब्याउने प्रस्ताव सहितको संविधान संशोधन प्रस्तावमाथिको जनमतसङ्ग्रहका लागि शनिबार मतदान शुरु भएको छ । तीन दिने यो मतदान अप्रिल २२ तारिखमा समाप्त हुनेछ । इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल–सिसीले राजधानी कायरोमा शनिबार मतदान गर्नुभयो । जनमतसङ्ग्रहले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेमा राष्ट्रपति अल–सिसीको वर्तमान कार्यकालमा दुई वर्ष थप गरी सन् २०२४ सम्म पुग्नेछ भने त्यसपछि छ वर्षे कार्यकालका लागि उनी पुनः उम्मेदवार हुन पाउनु हुनेछ । अधिकारकर्मीहरुले विरोध गरेपनि जनमतसङ्ग्रहले अरब विश्वको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र इजिप्टको राजनी
प्रकाशित मितिः बैशाख ७, २०७६
एसईईको परीक्षापछि कहाँ पढ्ने र के पढ्ने विषयमा धेरैको चिन्ता हुन्छ । यसमा विद्यार्थीमात्र नभएर अभिभावक पनि उत्तिकै चिन्तित देखिन्छन् । यस्तै समस्याबाट निकास दिनका लागि बजारमा धेरै इन्स्टिच्युट खुलेका छन् । त्यसमध्ये धरानमा शाखा विस्तार गरेको अल्फाविटा इन्स्टिच्युटमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो छ । वैशाखदेखि ब्रिज कोर्ष सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसै विषयमा अल्फाविटा धरानका शाखा प्रमुख अरुण अधिकारीसँग ब्लाष्टकर्मी बाबुराम सुवेदीले गरेको कुराकानीको सारः - तपाईंको इन्स्टिच्युटले के–के काम गर्दै आएको छ ? हामीले सबैभन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई गाइड गर्ने हो । त्यसका साथै वैदेशिक शिक्षा हासि
प्रकाशित मितिः बैशाख ६, २०७६
१,२४४ पटक पढिएको
गुरुयोजना बनाएर काम गर्ने यि गाउँपालिका अध्यक्ष
भोजपुरको आमचोक गाउँपालिका प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको निर्वाचन क्षेत्र तथा गृह गाउँ हो । यस गाउ“को नेतृत्व आमचोक ३ थिन्दिङ्खाका युवा अशोक राईले गरेका छन् । तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी भएका राई धरानको महेन्द्र क्याम्पसमा स्नातक गरेर धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसबाट ग्रामीण विकासमा स्नातकोत्तर गरेका युवा हुन् । २०५३ सालदेखि अखिलको राजनीति गरेका राई हाल नेकपाको जिल्ला कमिटीमा पनि छन् । पहिलो गाउँसभामा आफूलाई चढ्ने सुविधाको गाडी नकिनेर एम्बुलेन्स खरिद गरी चर्चामा आएका राईले आमचोकको बृहत्तर विकासका लागि नयाँ परियोजनाहरू ल्याएका छन् । उनी प्रदेश सरक
प्रकाशित मितिः चैत्र २५, २०७५
३,०७८ पटक पढिएको
युकेमा पढेर इटहरीमा व्यवसाय
पढाइपछि धेरैको सोचाइ जागिर खाने हुन्छ । तर, जागिरमात्रै सबै थोक होइन । आफूले लिएको ज्ञानलाई व्यवसायिक पनि गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यताका टङ्कप्रसाद फुयाँल युकेको जागिर छाडेर इटहरीमा व्यवसाय गर्दै आएका छन् । उनी इटहरीका युवा व्यवसायीमा उदाएका छन् । उनको टिमले अहिले सोमानी कम्पनीका टायल्सहरूको एक्स्क्लुसिप शो रुम सञ्चालनमा ल्याएको छ । फुयाँलले काम गर्ने क्रममा केही समय कम्प्युटरसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गरे । त्यसपछि उनी पढाइकै लागि बेलायत पुगे । उच्च शिक्षा हासिल पनि गरे । उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि जागिर खानु पर्छ र सोही अनुसारको जीवन चलाउनु पर्छ भन्ने मान्यतालाई तोड्दै व्यवसायमा होमिएका छन् । मा
प्रकाशित मितिः चैत्र १५, २०७५
२,२१७ पटक पढिएको
२०१६ मिस नेपाल इन्टरनेशनल लेखी भन्छिन्– अब वातावरण जोगाउन वातावरणमन्त्री बन्छु
२०१६ कि मिस नेपाल इन्टरनेसनल बर्षा लेखी थारु समुदायकी पहिलो मिस नेपाल हुन् । सप्तरीमा जन्मेकी बर्षा लेखी वातावरण विज्ञानकी विद्यार्थी पनि । उनी हाल पिएचडीका लागि तयारी गरिरहेकी छन् । मिस नेपाल २०७६ को लागि धरान अडिसनमा आएकी लेखीसँग ब्लाष्ट खवरले गरेको कुराकानीको सार यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । आजकाल, के मा ब्यस्त हुनुहुन्छ ? म पिएचडिको तयारीमा छु । एउटा एनजिओमा आबद्ध रहेर सामाजिक कार्यहरु गरिरहेको छु । मिस नेपाल २०१६ को उपाधी पाउनु भयो । तपाईको लक्ष्य नै त्यही थियो ? त्योबेला मेरो खालीको समय थियो । स्नातक गरेर बसिरहेको थिए । नतिजाको पर्खाइमा थिए । त्यतिखेर मैले फेसबसकमा अनलाइन एप्ल
प्रकाशित मितिः चैत्र ४, २०७५
१,१८७ पटक पढिएको